Kana iwe uri nyanzvi muLinux une rombo rakanaka, une basa rakachengeteka. | Linux Vakapindwa muropa
Linux nyanzvi, basa remangwana maererano neSuSE executive
Zvakanaka hongu shamwari, iva Linux nyanzvi ihwo huremu hunokosha muCV yedu. Hazvishamise, kana tikatarisa tarisa tichaona kuwanda kwePC, mafoni, mapiritsi, smartTVs uye mamwe magaidhi ane Linux masisitimu. Kukosha kweiyi OS kuri kuwedzera uye nekuwedzera. Iyi ndiyo hwaro hwemutungamiriri kubva kuSUSE kutaura kuti inguva yakanaka yekuve neruzivo rweLinux.
Kunyangwe iyo dambudziko uye mamiriro anosiririsa emusika wevashandi, mabhizinesi e itsva technologies ivo vari kugara vachifamba zvakanaka chaizvo. Chimwe chinhu chakajairika kana isu tichifunga nezve yedu yazvino nzanga yakavakirwa pamatekinoroji matsva. Iyo makambani pane ruzivo rwetekinoroji ivo vanokura zuva rega rega uye kunyange kuda vashandi, chimwe chinhu chisingataurwe neese zvikamu
Zvinoenderana neazvino ongororo, vashandi veLinux vaive nesimba kudiwa kwebasa sa2012. Iyo Linux Foundation inoti inoda kuwedzera nekuwedzera tarenda nyowani. Kunyanya zvakanyanya, PCWORLD magazini yakabvunzurudza Michael Miller, mumwe wevakuru veSuSE. Miller anoti kudiwa kwacho kwakakwirira uye kuti inguva yakanaka yekuva mugadziri weLinux. Kambani yeSUSE inoti ine makumi mana emabasa ekuvhura software. M. Miller anovimbisa kuti tarenda, kushuvira, hunyanzvi hwekuronga uye ruzivo neLinux kernel zvakakosha kumabasa akadaro. Iwe unoziva: Linux ndeyeMangwana!
Mamwe mashoko - Mentor Graphics Volcano
Kunobva - PCWORLD
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux nyanzvi, basa remangwana maererano neSuSE executive
Mary G. akadaro
Mhoroi, ndiri kuda Ubuntu kana linux nyanzvi kuti ndibatsire kuisa chirongwa pane laptop muBuenos Aires. Kubhadhara kwakanakisa kunopihwa. Mapato anofarira ndapota pindura chirevo.
Pindura kuna Maria G
Kubvunzana naLuis Iván Cuende mune scoop yeLinuxadictos.com
Iyo yakanakisa uye isinganetsi Linux distros ya2013